SEARCH-က MS (ဒါဟာတစျခုကိုဖွင့်ဖို့ဘယ်လို & Is အဘယျသို့) File
Windows ကို ဖိုင်မှတ်တမ်းအမျိုးအစားများ
တစ်ဦး SEARCH-က MS ဖိုင်မှတ်တမ်းဆိုတာဘာလဲ
SEARCH-က MS ဖိုင်များ, ကိုပြန်လည်ပြင်ဆင်ရန်ကိုဖွင့်, & ပြောင်းလုပ်နည်း
တစ်ဦးက file ကို ရှာဖွေရေး-က MS နှင့်အတူ ဖိုင် extension ကိုသင်က Windows ကတဆင့် file ကိုရှာဖွေမှုများကိုဖျော်ဖြေဖို့ဖွတစ်ခုက Windows Vista ကအညွှန်းကိန်းရှာရန်မှာ Data ဖိုင် operating system ။
ဖန်ဆင်းရှာဖွေမှု ကို Windows Vista က ကို Windows Vista ကရှာရန်အညွှန်းကိန်းမှာ Data module တစ်ခုဖိုင်တွေနဲ့စတိုးဆိုင်များထို့နောက်လျင်မြန်စွာကွန်ပျူတာတလျှောက်လုံးသူများဖိုင်တွေတွေ့ပါရန်အသုံးပြုသည့်တစ်ဦး SEARCH-က MS ဖိုင်ထဲမှာသူများအပြောင်းအလဲများကိုစေအပြောင်းအလဲများကိုစောင့်ကြည့်နေသောကြောင့်အလုပ်။
SEARCH-က MS ဖိုင်ပေါ်တွင်အခြေခံကြပါသည် XML ကို သူတို့ဆိုလိုတာက file ကို format နဲ့, စာသားကိုဖိုင်တွေ ဖွင့်စာသားကို entries တွေကိုဆံ့သော။
မှတ်ချက်: SEARCH-က MS ဖိုင်တွေ Maxwell သို့မဟုတ် 3DS ဖြစ်စေမက်စ script ကိုဖိုင်တွေသောက MS ဖိုင်များ, ထက်ကွဲပြားခြားနားပါသည်။ သူတို့ကအစနဲ့အဆုံးသတ်ဖို့ဖိုင်များသက်ဆိုင်တဲ့င် XRM-က MS ။
တစ်ဦး SEARCH-က MS ဖိုင်မှတ်တမ်းကိုဖွင့်ဖို့ကိုဘယ်လို
အမှန်တကယ် SEARCH-က MS ဖိုင်များကိုအသုံးပြု tool ကို Windows Vista ကတွင်ထည့်သွင်း, ဒါကြောင့် file ကိုအလုပ်လုပ်ဖို့ဘာမှကို download လုပ်ပါရန်မလိုပါင်ဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ်တိုင် "running" သို့မဟုတ်သင်ကဲ့သို့ဖိုင် (တူသောဖိုင်တွေတခြားအမျိုးအစားများနှင့်အတူလို " စတင်. " ၏ရည်ရွယ်ချက်များအတွက် file တစ် SEARCH-က MS ဖွင့်လှစ်ရန်အကြောင်းတစ်ခုခုမရှိ EXE လျှောက်လွှာဖိုင်တွေသို့မဟုတ် က MP3 အသံဖိုင်တွေကို) ။
ရှာဖွေရေး-က MS ဖိုင်တွေဟာကို C ထဲမှာကို Windows Vista မှာသိမ်းထားပါတယ်: \_ Users \_ \_ ရှာဖွေမှု \_ ဖိုင်တွဲ။ ဒါကြောင့်အပေါငျးတို့သ .SEARCH-က MS ဖိုင် extension ရှိသည်သောအမျိုးမျိုးသောဖိုင်များကိုပါ၏ နေရာတိုင်းမှာအမည်ရှိ, E-mail ကို, လတ်တလောဂီတ, လတ်တလောရုပ်ပုံများနှင့်ဗွီဒီယိုများမကြာမီကရည်ညွှန်းတည်နေရာများ, လတ်တလောစာရွက်စာတမ်းများ, မကြာသေးမီကပြောင်းလဲ, ငါ့ကိုအားဖြင့်မျှဝေ။
ဤအ SEARCH-က MS ဖိုင်များကိုမဆိုဖွင့်လှစ်သောသူတို့အားတိကျတဲ့ setting များကို အသုံးပြု. ဖိုင်တစ်ဖိုင်ရှာဖွေရေးကိုဖွင့်ပါလိမ့်မယ်။ ဥပမာအားဖြင့်, လတ်တလော Documents.search-ms ဖွင့်လှစ်သင့်ရဲ့အများဆုံးမကြာသေးမီကအသုံးပြုသောစာရွက်စာတမ်းများကိုပြသပါလိမ့်မယ်။
Microsoft ကအမျိုးမျိုးသော SEARCH-က MS ဖိုင်တွေရဲ့ contents များ (ဤနေရာတွင်မြင်ကြ) ဥပမာအခြို့ရှိပါတယ်။ သူတို့သက်သက်သာဖိုင်တွေစာပို့နေကတည်းက, သင်က Windows အတွက်ကို Notepad သို့မဟုတ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထံမှ program တစ်ခုလိုပဲသူတို့အဖွင့်လှစ်ဖို့မဆိုစာသားကိုအယ်ဒီတာကိုသုံးနိုင်သည် အကောင်းဆုံးအခမဲ့စာသားအယ်ဒီတာများ စာရင်းဖြစ်သည်။
ထိပ်ဖျား: စာသားကိုအယ်ဒီတာတစ်ဦး SEARCH-က MS file ကိုဖွင့်လှစ်သင်လုပ်နိုင်သည်မယ့်ကို double-click နှိပ်ပြီး (သို့မဟုတ်ကို double-ကိုထိပုတ်ပါ) ဖိုင်ကိုကြောင့်အဲဒီပရိုဂရမ်ကိုဖွင့်လှစ်ရန်မျှော်လင့်ထားရန်။ အဲဒီအစား, သင်ပထမဦးဆုံးစာသားအယ်ဒီတာဖွင့်ပြီးတော့သင်ဖတ်ချင်သော SEARCH-က MS file ကိုရှာဖွေရန်၎င်း၏ပွင့်လင်း option ကိုသုံးစွဲဖို့ရှိသည်။
မှတ်ချက်: သင်မယ့်အစားတစ်ဦး .MS file ကိုဖွင့်လှစ်ဖို့လိုအပ်ခဲ့လျှင်သော Maxwell Script format နဲ့ဒါမှမဟုတ် 3DS Max Script ပုံစံတစ်ခုခုကိုအတွက်င် Maxwell သို့မဟုတ် 3DS Max စမ်းပါ။ ဤရွေ့ကားက MS ဖိုင်တွေလည်းစာသားအယ်ဒီတာအတွက်ဖွင့်လှစ်ပါလိမ့်မယ်။
တစ်ဦး SEARCH-က MS ဖိုင်မှတ်တမ်းပြောင်းလုပ်နည်း
တစ်ဦး SEARCH-က MS ဖိုင်ရဲ့ဖိုင်အမျိုးအစားပြောင်းခြင်းအလုပ်ကြောင့်အထူးသဖြင့် search function များအားအပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးလုပ်ပါလိမ့်မယ်။ အဆိုပါဖိုင် extension ကိုပြောင်းဒါမှမဟုတ် Windows တွင်အလုပ်လုပ်စေတဲ့ SEARCH-က MS ဖိုင်တစ်ဦးပြောင်းလဲလုပ်ဖို့မဆိုအကြောင်းရင်းရှိတယ်မဖြစ်သင့်ပါတယ်။
သင်တစ်ဦးကွဲပြားခြားနားသောပုံစံကိုအောက်မှာဖိုင်ရဲ့ contents တွေကိုမိတ္တူရှိသည်ဖို့ချင်တယ်ဆိုရင်သင်တစ်ဦး SEARCH-က MS ဖိုင်ပြောင်းချင်တယ်စေခြင်းငှါအဘယ်အရပ်တစ်ခုတည်းသောမြင်ကွင်းဖြစ်ပါတယ်။
ဥပမာအားဖြင့်, သင်တစ်ဦး SEARCH-က MS Notepad ++ အတွက် file ပြီးတော့သင်အလွယ်တကူစာသားအယ်ဒီတာအတွက် contents တွေကိုဖတ်ချင်လျှင် TXT ဖိုင်အဖြစ်ဖွင့် file ကို save ဖွင့်နိုင်ပါတယ်။ dedicated ဖိုင် converters အဖြစ် ထို့နောက် TXT ကဲ့သို့အခြားပုံစံများမှ file တစ်ခုကိုပြောင်းလဲနိုင်မည်အကြောင်း PDF ဖိုင်ရယူရန် , CSV ဖိုင် , XML ကို, ဒါမှမဟုတ် image file ကို formats အမျိုးမျိုးနဲ့။
SEARCH-က MS ဖိုင်များအပေါ် More Information ကို
SEARCH-က MS ဖိုင်တွေဖိုလ်ဒါတူအောင်, သူတို့ဖိုင်အမျိုးအစားအဖြစ်ကို Windows Explorer ကိုအသီးအသီးတံဆိပ်ကပ် "ရှာရန် Folder ကို" ပါပဲ။ သို့သော်ဤနေဆဲငါအထက်တွင်ဆက်စပ် Microsoft ရဲ့ဥပမာထဲမှာမွငျနိုငျအဖြစ်အခြားတူသောဖိုင်များကိုဖြစ်ကြသည်။
indexing ကို "က Windows Search ကို" ဝန်ဆောင်မှုရပ်တန့်ခြင်းဖြင့် Windows Vista ကအတွက်ပိတ်ထားနိုင်ပါတယ်။ ဒီအထဲတွင်န်ဆောင်မှုများဖြတ်လမ်းတဆင့်လုပ်ဆောင်နိုင်တယ် အုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာ Tools များ ။
မှတ်ချက်: တစ်ခု .MS ဖိုင်ပြောင်းလိုအပ်နေသောူပည်သူ? သူများသည်အများဆုံးဖွယ်ရှိအထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သော Maxwell သို့မဟုတ် 3DS Max program နဲ့ပြောင်းလဲခံရဖို့တတ်နိုင်ကြသည်။
SEARCH-က MS ဖိုင်များနှင့်အတူပိုများသောအကူအညီ
သင်ကသင့်ပါတယ်ထင်ကဲ့သို့သင်တို့တစ် SEARCH-က MS ဖိုင်ရှိသည်, သို့သော်အလုပ်လုပ်မသေချာတယ်ဆိုရင်တွေ့ နောက်ထပ်အကူအညီကိုရယူပါ , လူမှုရေးကွန်ရက်များပေါ်တွင်သို့မဟုတ်အီးမေးလ်ကနေတဆင့်ငါ့ကိုဆက်သွယ်နည်းပညာပံ့ပိုးမှုဖိုရမ်များအပေါ်ပို့စ်တင်နှင့်ထို့ထက် ပို. အကြောင်းသတင်းအချက်အလက်ပါ။ ငါ့ကိုသငျသညျအဖွင့်နှင့်အတူရှိခြင်းသို့မဟုတ်ရှာဖွေရေး-က MS ဖိုင်ကိုသုံးပြီးငါကူညီပေးဖို့အဘယ်သို့ပြုနိုင်သည်ကိုတွေ့မြင်ပါလိမ့်မယ်ဖွင့်ပြဿနာများ၏အဘယ်အရာကိုမျိုးကိုကိုသိပါစေသော။
.MS နှင့်အတူအဆုံးသတ်ရန်ဖိုင်တွေကိုအဘယ်သူ၏နောက်ဆက် .SEARCH-က MS ဖြစ်ပါတယ်သူတွေကိုကဲ့သို့တူညီသောမစပ်ဆိုင်ကြောင်းကိုသတိရပါ။ သင်တို့ကိုဖွင့်ဖို့လိုအပ်နေပါတယ်ဖိုင်မျိုးကိုဖွင့်ပါလျှင်က MS ဖိုင်တွေအကြောင်းကိုကြောင်းဆွေးနွေးချက်အထက်ပါကဏ္ဍများမှာနောက်တဖန်ကြည့်ပါ။
တစ်ဦးကို HTC ဖိုင်မှတ်တမ်းဆိုတာဘာလဲ
တစ်ဦး DYLIB ဖိုင်မှတ်တမ်းဆိုတာဘာလဲ
တစ်ဦး SCV ဖိုင်မှတ်တမ်းဆိုတာဘာလဲ
တစ်ဦး LZH ဖိုင်မှတ်တမ်းဆိုတာဘာလဲ
တစ်ဦး PSF ဖိုင်မှတ်တမ်းဆိုတာဘာလဲ
တစ်ဦး MDT ဖိုင်မှတ်တမ်းဆိုတာဘာလဲ
တစ်ဦး XBIN ဖိုင်မှတ်တမ်းကဘာလဲ?
တစ်ဦး Forge ဖိုင်မှတ်တမ်းဆိုတာဘာလဲ
တစ်ဦး EDS ဖိုင်မှတ်တမ်းဆိုတာဘာလဲ
အမေဇုံ: Echo Dot vs Google ပင်မ Mini ကို
ArtRage Studio က3ပန်းချီအစီအစဉ်ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း
Windows ကိုမေးလ်သို့မဟုတ် Outlook Express ကိုတစ်ဦးစာတိုက်ပုံး Sort လုပ်နည်း
အဆိုပါ OneNote User Interface Customize 18 သိကောင်းစရာများနှင့် Tricks
6 လွယ်ကူခြေလှမ်းများနှင့်အတူသင့်ရဲ့ Internet Explorer ကိုသမိုင်းကိုရှင်းလင်းလွယ်ကူဒါဟာင်
အဆိုပါ MobileMe မေးလ်နှင့် Mac.com SMTP က Settings ထဲက Find
Minecraft ၏ဇာတ်လမ်းတွဲပေါက်ကြား ?!
WWW - World Wide Web ကို
ခွဲထွက်အဖွဲ့ဆဲလ် Chaos သီအိုရီ Co-op ဗျူဟာလမ်းညွှန် - ဆိုးလ်
Shadows ၏ဘုံ Batman ၏တွေ့ခဲ့ရဘူးရဲ့ဗားရှင်းမှကြှနျုပျတို့ကိုမိတ်ဆက်
အဆိုပါဖက်ဒရယ်ဆက်သွယ်ရေးကော်မရှင် (FCC သည်)
Doom2မရှိမဖြစ် Cheat ကုဒ်များလမ်းညွှန်
SQL Server ကိုအေးဂျင့်နှင့်အတူကို automation Database ဟာအုပ်ချုပ်ရေး
ရှေ့ဆောင် Elite VSX-42 နှင့် VSX-60 မူလစာမျက်နှာပြဇာတ်ရုံ receiver
26 အကြိုက်ဆုံးကျောင်းဆင်းပွဲ, E-Card ကိုဆိုဒ်များ 2018
သငျသညျနောကျခံရနေရမည် 25 ကြီးမားသောဗိုကြယ်
Corsair မီးတောင် 250D